China PET ပုလင်းမှုတ်စက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပံ့ပိုးသူများ | မင်္ဂလာပါ
FG စီးရီး PET ပုလင်းမှုတ်စက်
ဒီစက်တွင်အလိုအလျှောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ပုလင်းချခြင်းစနစ်တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည်သောက်သုံးရေပုလင်းများ၊ ကာဗွန်နိတ်ပုလင်းများနှင့်ရေပူပုလင်းများပုံစံအားလုံးအတွက်အသုံးပြုသည်။ FG4 ကို module တွေသုံးခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ prefrom lift, unscrambler နဲ့ host machine တို့ပါ။
FG စီးရီးပုလင်းမှုတ်စက်သည်မျိုးဆက်သစ်လုတ်စက်၏မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အမြန်နှုန်း၊ စွမ်းအင်နိမ့်ခြင်းနှင့်ဖိအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့်ထူးခြားသည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သောတည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်း၊ အာကာသသိမ်းမှု၊ ဆူညံသံနှင့်တည်ငြိမ်မှုတို့ကြောင့်အမျိုးသားနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အညစ်အကြေးသန့်ရှင်းရေးစံချိန်စံညွှန်းများ။ ဒီစက်သည်အမြင့်ဆုံးအဆင့်မြင့်လွင့်မျောနေသည့်စက်များကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ၎င်းသည်အလတ်စားနှင့်အကြီးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးပုလင်းထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
၁။ Servo ကားမောင်းနှင်မှုနှင့် cam linking blowing section:
ထူးခြားသော cam linking system သည်မှို - ဖွင့်ခြင်း၊ မှို - သော့ခတ်ခြင်းနှင့်အောက်ခြေမှို - အမြင့်ကိုလှုပ်ခြင်းနှင့်လည်ပတ်မှုသံသရာကိုအလွန်တိုစေပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်မားစေသည်။
2. သေးငယ်တဲ့အကွာအဝေးအပူ system ကိုလုပ်ဆောင်တယ်
အပူပေးမီးဖို၌အပူပေးသည့်အကွာအဝေးသည် ၃၈% ကျော်သောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုကိုသက်သာစေသည်။
rotary နှင့် soft preform ၀ င်ပေါက်စနစ်တို့ဖြင့် prefom နို့တိုက်ကျွေးမှု၏အမြန်နှုန်းကိုသေချာစေပြီး preform လည်ပင်းအားကောင်းစွာကာကွယ်ထားသည်။
4. Modular ဒီဇိုင်းကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်အပိုပစ္စည်းများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန် modularized design concept ကိုချမှတ်ခြင်း။
နှစ်ထပ်ကိန်းပုလင်းအမြင့် diagonal (mm)
အမြင့်ဆုံး preform အရှည် (mm)
ဗို့အား / ကြိမ်နှုန်း (V / Hz)
မှိုရေ ဖိအား (ဘား)
အပူချိန်ထိန်းညှိနိုင်သည့်ပမာဏ (° C)
မီးဖို ဖိအား (ဘား)
စက်အရွယ်အစား ()) (L * W * H)
နောက်တစ်ခု: PPR ပိုက်စက်
3 အလွှာ PERT (ကော်, UVH) ပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
5L / 10L Rotary အလိုအလျောက်ပုလင်းဖြည့်စက်
၁။ တွင်းထွက် / သန့်စင်သောရေဖြည့်စက်တစ်လုံးတွင်အလိုအလျောက်ပုလင်းသုတ်ခြင်း ၃ သည်ဆေးကြောခြင်း / ဖြည့်ခြင်း / ဖုံးအုပ်ခြင်း ၃-in-1 နည်းပညာ၊ PLC ထိန်းချုပ်မှု၊ Touch Screen ကိုအဓိကအားဖြင့်အစားအစာအဆင့် SUS304 ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
၂။ ၎င်းကိုရေ၊ သောက်ရေကဲ့သို့သောကာဗွန်မဟုတ်သောရေအမျိုးအစားများကိုဖြည့်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ တွင်းထွက်ရေ, စမ်းရေ, အရသာရေ။
၃။ ပုံမှန်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းသည်တစ်နာရီလျှင် ၁၀၀၀ မှ ၃၀၀၀ ကြားရှိနိုင်သည်။ 5L-10L PET ပုလင်းရနိုင်သည်။